RASMI: Manchester United oo ku dhawaaqday in Real Madrid ay kala heshiisay saxiixa Raphael Varane – Gool FM
Dajiye July 27, 2021
(Manchester) 27 Luulyo 2021. Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaartay Real Madrid, kaasoo ku saabsan saxiixa daafaca reer France ee Raphael Varane uu ku imaanayo garoonka Red Devils ee Old Trafford.
Kooxda reer England ayaa warbixin ay ku daabacday website-keeda rasmiga ah waxay ku sheegtay in daafaca heerka caalami reer France ee Raphael Varane uu ku gudajiro dhameystirta arrimaha qaandaraasyada uu ugu biirayo Manchester United iyo baaritaanada caafimaad.
Dhankeeda Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in daafaca reer France ee Raphael Varane uu ku biirayo kooxda Manchester United.
Warbixin rasmi ah oo lagu daabacay website-ka kooxda Real Madrid ayaa waxaa lagu sheegay:
“Real Madrid iyo Manchester United waxay ku heshiiyeen heshiiska ciyaaryahanka Raphael Varane.”
“Kooxdeena waxay uga mahadcelinayaan Varane xirfaddiisa iyo dhaqankiisa ku dayashada leh mudadii tobanka xilli ciyaareed ee uu difaacayay maaliyadeena, taasoo uu ku hantay 18 koob, 4 Champions League, 4 Club World Cup, 3 UEFA Super Cup, 3 horyaalka La Liga, 1 Copa del Rey iyo 3 koob oo Spanish Super Cup ah.”
Warbixinta ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay: “Real Madrid waxay rabtaa inay muujiso dhamaan dareenkeeda ku aadan Raphael Varane iyo qoyskiisa waxayna u rajeyneysaa wanaag dhamaan marxaladan cusub ee xirfadiisa ciyaareed.”
Sidoo kale Manchester United oo shaacisay inay la wareegtay Raphael Varane si uu u noqdo heshiiskii saddexaad ee xagaaga ee kooxda, kaddib Jadon Sancho iyo Tom Heaton ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay:
“Manchester United waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay heshiis la gaartay Real Madrid oo ku saabsan la wareegitaanka daafaca reer France ee Raphael Varane.”
“Raphael Varane wuxuu mari doonaa baaritaan caafimaad, iyada oo la dhameystiriyo qaar ka mid ah shuruudaha shaqsiyadeed ee ciyaaryahanka.”
Si kastaba ha ahaatee, Waxaa xusid mudan in Varane uu yahay difaacii labaad ee ka taga kooxda Real Madrid xagaagan, kaddib Sergio Ramos, oo u dhaqaaqay Paris Saint-Germain.